Medallia: Meziwanye Ahụmịhe Ndị Ahịa B2B | Martech Zone
Medallia: Meziwanye Ahụmịhe Ndị Ahịa B2B
Wednesday, November 13, 2013 Wednesday, November 13, 2013 Douglas Karr
Ghọta na ịdebe ogo nke ahụmịhe nke ndị ahịa gị na-esiwanye ike n'ihi na ndị ahịa gị na-emetụ ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke nzukọ gị aka. Site na ndị na-ere ahịa na-eji sọftụwia na kọntaktị na-eduga, ngwa ọrụ ozi ndị a abụghị naanị ọnụ na enweghị ike, mana ha nwere ike ime ka ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume inwe echiche zuru oke nke ndị ahịa na ahụmịhe ha na ụlọ ọrụ gị.
Ndị otu ahịa nwere ike ịmatakwu nsogbu ndị ahịa mgbe ha nwere ike ịhụ echiche dị n'otu maka ụdị nzaghachi niile, na-ejikọ afọ ojuju / mmekọrịta nnyocha e mere na -eju afọ ojuju na nke ọ bụla n'ime isi mmekọrịta ihe na ịgụnye mejupụtara ahụmịhe ndị ahịa.
Medallia si onyinye ohuru B2B na enyere ihe a aka. Ọ na - enye gị ohere ịmatakwu n’ime etu ndị ahịa gị siri ele ahụmịhe ahụ anya. Nweta eserese zuru oke, echiche niile nke ahụmịhe nke ndị ahịa gị na-agabiga. Uru nke echiche a? Ọ na-egosipụta nnukwu ohere imeziwanye bụ ngalaba ngalaba na okike, ohere mmezi nke, ọ bụ ezie na ndị ahịa gị doro anya, nwere ike ịmịpụ n'etiti mgbawa dị n'ime ụlọ ọrụ B2B.
Ihe ngwọta si Medallia achịkọta nzaghachi si n'aka ndị ahịa ọ bụla weebụsaịtị, ọnọdụ, nkwado, ire ahịa, ọbụlagodi mmekọrịta onye ọ bụla - wee debanye aha nzaghachi ahụ na sistemụ dị n'otu nke na-enye ụlọ ọrụ gị echiche na-agbanwe agbanwe gafee ngalaba. Ọ naghị ahapụ ngalaba gị ka ọ hụ akụkụ azụmaahịa ha na-ahụ maka; ọ na-enyere ndị otu akaụntụ gị aka ịghọta nzaghachi na ọkwa akaụntụ ma mee ka ndị na-elekọta gị ghọta ihe niile gbasara ahụmịhe ndị ahịa gị.
Tags: b2b ọgụgụ isi nke ndị ahịab2b afọ ojuju ndị ahịamedallia
Playnomics: Akaụntụ Nnweta Mobile App (AVP)
Visual Website Optimizer: Meewanye Ahịa na Ntugharị